သှယျလတြဲ့ခန်ဓာကိုယျအလှနဲ့ ပရိသတျတှကေို အံ့အားသငျ့စခေဲ့တဲ့ Adele – SoShwe
Home/Entertainment/သှယျလတြဲ့ခန်ဓာကိုယျအလှနဲ့ ပရိသတျတှကေို အံ့အားသငျ့စခေဲ့တဲ့ Adele
သှယျလတြဲ့ခန်ဓာကိုယျအလှနဲ့ ပရိသတျတှကေို အံ့အားသငျ့စခေဲ့တဲ့ Adele
So Shwe May 8, 2020	Entertainment Leaveacomment
ဟောလီဝုဒျအကြျောအမျော Adele ဟာ အသံပါဝါကောငျးကောငျးနဲ့ သီခငျြးနားဆငျသူတှရေဲ့ စိတျနှလုံးကို ထိရှပြျောရှငျစမေယျ့ သီခငျြးတှကေို ရေးသားသီဆိုတဲ့ အဆိုတျောတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ Adele ဟာ အနုပညာအသိုငျးအဝိုငျးက အသိအမှတျပွုတဲ့ ပိနျပါးသှယျလတြဲ့ ခန်ဓာကိုယျကို မပိုငျဆိုငျထားပမေယျ့လညျး သူမကိုခဈြတဲ့ပရိသတျတှကေတော့ Adele မှ Adele ပါဘဲ။ ဒါပမေယျ့လညျး လူတဈဦးက ဘယျလောကျပဲလှနပေါစေ။ ထူးခြှနျထကျမွကျနပေါစေ။ စိတျထားကောငျးနပေါစေ။ သူ့ကိုမခခဈြတဲ့သူတှကေတော့ သူ့ကိုအပွဈရှာဝဖေနျနဦေးမှာပါပဲ။
အနုပညာရှငျတဈဦးဖွဈတဲ့ Adele ဟာလညျး သူမကို မခဈြမနှဈသကျသူတှရေဲ့ အပွဈရှာဝဖေနျခွငျးကို ပကျပကျစကျစကျခံခဲ့ရဖူးပါတယျ။ Adele ကို အပွဈရှာဝဖေနျသူအမြားစုဟာ သူမရဲ့ ပွညျ့ဖွိုးတဲ့ခန်ဓာကိုယျကို ပဈမှတျထားပွောဆိုခဲ့ကွပါတယျ။ Adele က သတငျးမီဒီယာတှေ၊ မဂ်ဂဇငျးတှနေဲ့ ပွုလုပျတဲ့ အငျတာဗြူးတှေ အနုပညာရှငျစကားဝိုငျးတှမှော ကိုယျ့ကိုယျကိုခဈြမွတျနိုးတတျခွငျးနဲ့ဆိုငျတဲ့ ခံယူခကျြတှေ ယုံကွညျခကျြတှကေို မြှဝပွေောပွတဲ့အခါမြိုးမှာ ဝဝလှလှလေးတှကေို အလကားနရေငျး အလကားအမွငျကတျတတျ ၊ မုနျးတီးတတျသူတှရေဲ့ ရကျစကျတဲ့ဝဖေနျမှုတှကေို ကွုံတှခေဲ့ရဖူးပါတယျ။
မကွာသေးခငျက Adele တဈယောကျ သူငယျခငျြးတှနေဲ့အတူ ကမျးခွမှောအပနျးဖွနေတေဲ့ ဓာတျပုံတှဟော လူမှုကှနျရကျပျေါမှာ ပလူပြံခဲ့ပွီး လူတှရေဲ့အာရုံစိုကျခွငျးကို ရရှိခဲ့ပါတယျ။ ဘာကွောငျ့မြားလူတှကေ အာရုံစိုကျလာကွတာလဲဆိုတော့ အဆိုပါဓာတျပုံထဲမှာတှရေ့တဲ့ Adele ဟာ အရငျလို ဝဖွိုးပွီးလှပတဲ့ ခန်ဓာကိုယျကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ Adele မဟုတျတော့ဘဲ အဆီပိုကငျးရှငျးပွီး သှယျလလြှပတဲ့ ခန်ဓာကိုယျကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ Adele အဖွဈ ပွောငျးလဲသှားတာကွောငျ့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
Adele ရဲ့ ပိနျပါးသှယျလတြဲ့ခန်ဓာကိုယျကို မွငျပွီးတဲ့ သူတခြို့ကတော့ “Adele ဟာ ဘာရောဂါဝဒေနာကိုမြား ခံစားလိုကျရလို့ ပိနျသှားတာလဲ?” ၊ “အရငျတုနျးကလို ဝဖွိုးနမှေလှတာ။ အခုပိနျသှားတော့ မလှတော့ဘူး!”လို့ ဝဖေနျကပြွီး Adele ကိုခဈြတဲ့ ပရိသတျကွီးကတော့ Adele ဘယျလိုနနေကေို ခဈြနတေော့တာပါပဲ။
မကွာသေးခငျက Adele ဟာ သူ့ရဲ့အငျစတာဂရမျအကောငျ့မှာ မှေးနပှေဲ့ကိုကငျြးပနတေဲ့ ဓါတျပုံတဈပုံကို တငျခဲ့ပါတယျ။ အဆိုပါဓါတျပုံထဲမှာတော့ လှပပွညျ့စုံတဲ့ အနကျရောငျဂါဝနျလေးကို ဝတျဆငျထားပွီး ၃၂ နှဈပွညျ့မှေးနပှေဲ့ကို ပြျောရှငျစှာကငျြးပနတေဲ့ Adeleကို တှမွေ့ငျရမှာပဲဖွဈပါတယျ။ Adele က သူ့ရဲ့ဓါတျပုံကို အငျစတာဂရမျမှာတငျပွီး သိပျမကွာခငျမှာပဲ သူမရဲ့ပွောငျးလဲလာတဲ့ ခန်ဓာကိုယျနဲ့ပတျသကျပွီး လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာတှမှော ဝဖေနျလကေနျသူတှေ အမြားကွီးရှိခဲ့ပါတယျ။
အမြိုးသမီးထုကွီးရဲ့ ခန်ဓာကိုယျအလှအပရေးဆိုငျရာ လှုပျရှားသူတဈဦးဖွဈတဲ့ Nabela Noor က “Adele ရဲ့ လှပမှုကို ခန်ဓာကိုယျအလေးခြိနျနဲ့ မတိုငျးတာဘဲ ခြီးမှမျးခနျးဖှငျ့သငျ့တယျ။ Adele ဟာ ဟိုအရငျကတညျးကလညျး လှပတယျ။ အခုလညျး လှနတေုနျးပဲ။” လို့ သူ့ရဲ့တှဈတာအကောငျ့မှာ ရေးသားမြှဝခေဲ့ပါတယျ။ Adele ရဲ့အလှတရားအပျေါမွငျတဲ့ Nabela ရဲ့အမွငျဟာ သဘာဝကပြွီး ကိုယျခငျြးစာမှုအပွညျ့အဝရှိနတောကို သတိထားမိပါတယျ။
အနုပညာလောကမှာ အမြိုးသမီး အနုပညာရှငျတှဟော အမြိုးသားအနုပညာရှငျတှထေကျ သူတို့ရဲ့အရညျအခငျြးတှကေို ဘေးခြိတျခံရပွီး သူတို့ရဲ့ခန်ဓာကိုယျနဲ့ ပတျသကျတဲ့ မေးခှနျးတှေ ဝဖေနျခကျြတှကေို မနားတမျးကွားခဲ့ရတာဖွဈပါတယျ။ အနုပညာရှငျတှတေငျမဟုတျဘဲ သာမနျအမြိုးသမီးတှဟောလညျး သူတို့ရဲ့ခန်ဓာကိုယျနဲ့ ပတျသကျပွီး ကဲ့ရဲ့ခွငျး၊ ခြီးမှမျးခွငျးကို ခံနရေတုနျးပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ အမြိုးသမီးတဈဦးရဲ့ အလှတရားဟာ ခန်ဓာကိုယျတငျမဟုတျဘဲ ထကျမွကျထူးခြှနျမှုနဲ့ စိတျနှလုံးဖွူစငျမှု ဖွဈတယျဆိုတာကို လူ့အသိုငျးအဝိုငျးကွီးက လကျခံဖို့ ကွိုးစားကွရပါဦးမယျ။
သွယ်လျတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလှနဲ့ ပရိသတ်တွေကို အံ့အားသင့်စေခဲ့တဲ့ Adele
ဟောလီဝုဒ်အကျော်အမော် Adele ဟာ အသံပါဝါကောင်းကောင်းနဲ့ သီချင်းနားဆင်သူတွေရဲ့ စိတ်နှလုံးကို ထိရှပျော်ရွှင်စေမယ့် သီချင်းတွေကို ရေးသားသီဆိုတဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Adele ဟာ အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းက အသိအမှတ်ပြုတဲ့ ပိန်ပါးသွယ်လျတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို မပိုင်ဆိုင်ထားပေမယ့်လည်း သူမကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ Adele မှ Adele ပါဘဲ။ ဒါပေမယ့်လည်း လူတစ်ဦးက ဘယ်လောက်ပဲလှနေပါစေ။ ထူးချွန်ထက်မြက်နေပါစေ။ စိတ်ထားကောင်းနေပါစေ။ သူ့ကိုမခချစ်တဲ့သူတွေကတော့ သူ့ကိုအပြစ်ရှာဝေဖန်နေဦးမှာပါပဲ။
အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Adele ဟာလည်း သူမကို မချစ်မနှစ်သက်သူတွေရဲ့ အပြစ်ရှာဝေဖန်ခြင်းကို ပက်ပက်စက်စက်ခံခဲ့ရဖူးပါတယ်။ Adele ကို အပြစ်ရှာဝေဖန်သူအများစုဟာ သူမရဲ့ ပြည့်ဖြိုးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ပစ်မှတ်ထားပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ Adele က သတင်းမီဒီယာတွေ၊ မဂ္ဂဇင်းတွေနဲ့ ပြုလုပ်တဲ့ အင်တာဗျူးတွေ အနုပညာရှင်စကားဝိုင်းတွေမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်မြတ်နိုးတတ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ ခံယူချက်တွေ ယုံကြည်ချက်တွေကို မျှဝေပြောပြတဲ့အခါမျိုးမှာ ဝဝလှလှလေးတွေကို အလကားနေရင်း အလကားအမြင်ကတ်တတ် ၊ မုန်းတီးတတ်သူတွေရဲ့ ရက်စက်တဲ့ဝေဖန်မှုတွေကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရဖူးပါတယ်။
မကြာသေးခင်က Adele တစ်ယောက် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ ကမ်းခြေမှာအပန်းဖြေနေတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေဟာ လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ ပလူပျံခဲ့ပြီး လူတွေရဲ့အာရုံစိုက်ခြင်းကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်များလူတွေက အာရုံစိုက်လာကြတာလဲဆိုတော့ အဆိုပါဓာတ်ပုံထဲမှာတွေ့ရတဲ့ Adele ဟာ အရင်လို ဝဖြိုးပြီးလှပတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Adele မဟုတ်တော့ဘဲ အဆီပိုကင်းရှင်းပြီး သွယ်လျလှပတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Adele အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားတာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Adele ရဲ့ ပိန်ပါးသွယ်လျတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို မြင်ပြီးတဲ့ သူတချို့ကတော့ “Adele ဟာ ဘာရောဂါဝေဒနာကိုများ ခံစားလိုက်ရလို့ ပိန်သွားတာလဲ?” ၊ “အရင်တုန်းကလို ဝဖြိုးနေမှလှတာ။ အခုပိန်သွားတော့ မလှတော့ဘူး!”လို့ ဝေဖန်ကျပြီး Adele ကိုချစ်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးကတော့ Adele ဘယ်လိုနေနေကို ချစ်နေတော့တာပါပဲ။
မကြာသေးခင်က Adele ဟာ သူ့ရဲ့အင်စတာဂရမ်အကောင့်မှာ မွေးနေ့ပွဲကိုကျင်းပနေတဲ့ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံကို တင်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါဓါတ်ပုံထဲမှာတော့ လှပပြည့်စုံတဲ့ အနက်ရောင်ဂါဝန်လေးကို ဝတ်ဆင်ထားပြီး ၃၂ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပွဲကို ပျော်ရွှင်စွာကျင်းပနေတဲ့ Adeleကို တွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Adele က သူ့ရဲ့ဓါတ်ပုံကို အင်စတာဂရမ်မှာတင်ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ သူမရဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာ ဝေဖန်လေကန်သူတွေ အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။
အမျိုးသမီးထုကြီးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလှအပရေးဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားသူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Nabela Noor က “Adele ရဲ့ လှပမှုကို ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ မတိုင်းတာဘဲ ချီးမွမ်းခန်းဖွင့်သင့်တယ်။ Adele ဟာ ဟိုအရင်ကတည်းကလည်း လှပတယ်။ အခုလည်း လှနေတုန်းပဲ။” လို့ သူ့ရဲ့တွစ်တာအကောင့်မှာ ရေးသားမျှဝေခဲ့ပါတယ်။ Adele ရဲ့အလှတရားအပေါ်မြင်တဲ့ Nabela ရဲ့အမြင်ဟာ သဘာဝကျပြီး ကိုယ်ချင်းစာမှုအပြည့်အဝရှိနေတာကို သတိထားမိပါတယ်။
အနုပညာလောကမှာ အမျိုးသမီး အနုပညာရှင်တွေဟာ အမျိုးသားအနုပညာရှင်တွေထက် သူတို့ရဲ့အရည်အချင်းတွေကို ဘေးချိတ်ခံရပြီး သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းတွေ ဝေဖန်ချက်တွေကို မနားတမ်းကြားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာရှင်တွေတင်မဟုတ်ဘဲ သာမန်အမျိုးသမီးတွေဟာလည်း သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကဲ့ရဲ့ခြင်း၊ ချီးမွမ်းခြင်းကို ခံနေရတုန်းပါပဲ။ ဒါကြောင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ အလှတရားဟာ ခန္ဓာကိုယ်တင်မဟုတ်ဘဲ ထက်မြက်ထူးချွန်မှုနဲ့ စိတ်နှလုံးဖြူစင်မှု ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို လူ့အသိုင်းအဝိုင်းကြီးက လက်ခံဖို့ ကြိုးစားကြရပါဦးမယ်။
Source ~ Teenvogue
Previous ဥပဒစေညျးမဉျြးအသဈတှနေဲ့ နညျးပညာအခွပွေု လူမှုကှနျရကျကုမ်ပဏီကွီးမြား။
Next COVID-19 ????????????????????? ???????????????????